Times24 Nepal » बल्ने ढुंगाको पछि लाग्दा बच्चुराम गुरुङको ५० लाख स्वाहा।
बल्ने ढुंगाको पछि लाग्दा बच्चुराम गुरुङको ५० लाख स्वाहा।
काठमाडौं। बल्ने ढुंगाको लोभमा लाग्दा बच्चुराम गुरुङले ५० लाख रुपैयाँ गु’माएका छन्। स्वयम्भू भगवानपार्कका गुरुङले बल्ने ढुंगा किन्न जाँदा उनको ५० लाख रुपैयाँ लु’टिएको हो। लु’टेरा समूहका ६ जनालाई महानगरीय अ’पराध महाशाखाको टोलीले आइतबार प’क्राउ पछि सार्वजनिक गरेको छ।
प’क्राउ पर्नेमा दाङको पुरन्धारा ९ का भीमबहादुर घर्ती मगर, नुवाकोटका नकुर तामाङ, रसुवाको आमाछोदिङ ५ का दावाछिरिङ तामाङ, रामेछाप मन्थलीका कुमारबहादुर बुढाथोकी, रसुवाका तेन्जिन तामाङ र सोही ठाउँका सञ्जीव वाइबा रहेका छन्। उनीहरूले शुक्रबार गुरुङको ५० लाख रुपैयाँ लु’टेका थिए।
को हुन् ५० लाख लु’टिने गुरुङ ?
पुर्ख्याैली घर सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीका गुरुङ नेपाली सेनाको सुवेदारबाट अ’वकाशप्राप्त सैनिक हुन्। अ’वकाश हुँदासम्म कमाएको केही रकम र पुर्ख्याैली सम्पत्तिबाट जोगिएको रकमले उनले स्वयम्भु, भगवानपार्कमा घर बनाएका छन्।
सेनाको जागिरबाट अ’वकाश पाएपछि भगवानपार्कमा घर बनाएका गुरुङले जग्गा कारोबारमा हात हाले। विभिन्न ठाउँमा सस्तोमा जग्गा किन्ने र नाफा आउने भएपछि बेच्ने गर्छन्।
यसरी लु’टियो ५० लाख।
जग्गा कारोबारी गुरुङ र लु’टेरा समूहबीच लामो समयदेखिको चिनजान थिएन। १५ दिनअघि मात्र बालाजुको एक चिया पसलमा उनीहरूको भेट भएको हो। सामान्य कुरा गर्दै जाँदा लु’टेरा समूहका मुख्य नाइके भीमबहादुर घर्तीमगरले आफू पनि जग्गा कारोबोरी नै भएको बताए। मगरको कुरा सुनेका गुरुङ र उनीहरूबीच कुरा हुन थाल्यो। मगरले धापासीमा आफूसँग १९ आना जग्गा रहेको र किन्ने भए प्रतिआना १५ लाखको हिसाबले दिनेसमेत बताएका थिए।
यत्ति भन्दा गुरुङलाई उनी जग्गा कारोबारी नै हुन् भन्ने लागेको थियो। यसरी कुरैकुरामा उनले आफ्ना बाजेसँग ब’हुमूल्य ढुंगासमेत रहेको बताए। फोटोेसमेत देखाए। गुुरुङले त्यो सजिल्लै पत्याए। हेर्ने सोच बनाए। तर, घर्तीमगरले किन्ने सोच र पैसा शो’ गरे मात्र देखाउने सर्त राखे। उनले त्यो सर्त पनि माने।
प्रश्न: कता छ सामान गुरुङले भीमबहादुर लाई सोधे’?
उत्तर: उनको उत्तर थियो तारकेश्वर शान्तिधाम नजिक छ।
कहिले हेर्ने’? भीमबहादुरले भने, ९ माघ शुक्रबार बिहान १० बजे। एक दिनको भेटमै कुराको छिनोफानो गरेका गुरुङ र घर्तीमगरबीच फोनमा समेत थोरै मात्र कुराकानी भएको महानगरीय अ’पराध महाशाखाका प्रखुख एसएसपी सहकुल थापाको भनाइ छ।
कसरी यत्ति चाँडै विश्वस गरे र ५० लाख लिएर उनी भेट्न गए ? हामी पनि अचम्ममा परेका छौं, एसएसपी थापाले भने।
पहिलो दिनमै कुराको छिनोफानो गरेका गुरुङ र उनका साथी अर्जुन सिलवाल शुक्रबार झोलाभरि ५० लाख लिएर तारकेश्वर २, काभ्रेस्थलीको शान्तिधाम पुगे। त्यहाँ पुग्दा उनलाई बहुमूल्य ढुंगा देखाउने घर्तीमगरसँग अन्य पाँच जना पनि थिए। उनीहरू ६ जना तीनवटा २ सय २० सीसी क्षमता भएका बजाजको मोटरसाइकलमा त्यहाँ पुगेका थिए।
पैसा ल्याएको थाहा पाएका उनीहरूले भेट्नासाथ गुरुङ र उनका साथी सिलवाललाई नियन्त्रणमा लिएका थिए। लु’ट्ने योजना सहित शान्तिधाम पुगेका उनीहरूले सुरूमा खु’कुरी र रड देखाएको र पछि भाग्ने बेला आँखामा खु’र्सानी हा’लेर पैसाको झोला लिएर भागेको प्रहरीको भनाइ छ।
यसरी परे प्रहरीको फन्दामा।
५० लाख लिएर लु’टेरा फरार भएपछि गुरुङलाई दिउँसै सपना जस्तो लागेको थियो। एकछिन अघि झोलाभरि पैसा बोकेर गएका उनीसहित उनका साथी सिलवालले लु’टेरा समूहको पिटाइ पनि खाएका थिए। शान्तिधामबाटै गुरुङले बालाजु प्रहरीलाई आत्तिँदै फोन गरेर भने, सर’ मेरो शान्तिधामबाट ५० लाख लु’टियो। बालाजु प्रहरीलाई आएको सूचना भेरिफाई गर्दै महानगरीय अ’पराध महाशाखाको टोली शान्तिधाम पुग्यो।
घ’टनाको प्रकृति र पी’डितलाई थप सोधपुछ गरे। घ’टना स्थलको मोबाइल लोकेसन हेरे। मोबाइल लोकेसन र हुलियाका आधारमा शुक्रबार नै सुरूमा रसुवाका तेन्जिङ र सञ्जीव बालाजुबाट प’क्राउ परे। उनीहरू प’क्राउ गर्न सफल भएको प्रहरीले अन्य ४ जनालाई भने ४८ घण्टा भित्र प’क्राउ गरेको हो।
लु’टेको पैसाले मस्ती।
प्रहरीका अनुसार शुक्रबार साँझ नै प’क्राउ परेका रसुवाका तेन्जिङ र सञ्जीव बाहेक अन्य चार जनाले शुक्रबारको राति लु’टेको पैसाले मस्ती गरेका छन्। लुु’टेरा समूहका मुख्य यो’जनाकार भीमबहादुर घर्ती मगरले लु’टेको रकममध्ये ३ लाख ३० हजारमा बजाजको २ सय २० सीसीको मोटरसाइकल किने।
अनि सोही मोटरसाइकलमा आफ्नो केटी साथीलाई लिएर नगरकोट पुगेर मस्ती गरेको खुलेको प्रहरीको भनाइ छ। त्यस्तै, दावा छिरिङले आफूले लिएको ऋण तिरे भने कुमार बुढाथोकी र नकुर तामाङले घरभाडा तिर्नेदेखि फाइनान्सको किस्ता तिर्ने काम गरेको र काठमाडौंको महँगो होटलमा बसेर मस्ती गरेको खुलेको छ।
१८ लाख मात्र बरामद।
प्रहरीले ५० लाख लु’टेको मध्ये उनीहरूको साथबाट जम्मा १८ लाख ७५ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र नगद ब’रामद गरेको छ। नगदबाहेक नयाँ किनेको मोटरसाइकल र सुनको औंठी १ थान, ड’कैतीमा प्रयोग भएका अन्य तीनवटा मोटरसाइकल र मोबाइलहरू ब’रामद भएको प्रहरीले जनाएको छ।
प’क्राउ परेका मध्ये सञ्जीव तामाङ यसअघि न’क्कली सुन सहित प’क्राउ परेर १ लाख ध’रौटीमा छुटेको अ’भियुक्त भएको खुलेको छ। उनीहरू माथि थप अ’नुसन्धान भइरहेको अ’पराध महाशाखाको भनाइ छ। यो खबर कृष्णसिंह लोथ्यालले शिलापत्र डटकममा लेख्नु भएको छ।